Izinhlobo ezi-3 zezinja zensizakalo - Ukuqeqeshwa Kwezinja
Izinhlobo ezi-3 zezinja zensizakalo
E-United States, noma iyiphi inja esiza umuntu okhubazekile ibhekwa njengenja yokusebenza (ngaphandle kwezinja zokwelapha).
Ukukhuluma ngokomthetho, izinja zokwelapha zikhona hhayi “Izinja zensizakalo” futhi azinalo ilungelo lokuthola izinzuzo ezifanayo nezinja ezinikeza ngosizo (ukungena kunoma yisiphi isakhiwo somphakathi noma izinto zokuhamba).
Khumbula ukuthi, ngokwe-federal American Disability Act, noma iyiphi inja esiza umuntu okhubazekile ibhekwa njengenja yezinsizakalo (ngaphandle kwezinja zokwelapha). Izinja zensizakalo zinelungelo lokungena ngokukhululekile ezakhiweni nasezokuthutha (amabhasi, izitimela, izindiza). Akudingeki ubufakazi noma isitifiketi, yize izinhlangano eziningi eziqeqesha izinja zensizakalo zinikeza abaphathi bazo uhlobo oluthile lwe-ID ngenja yabo.
Nazi “izinhlobo” ezimbalwa zezinja zensizakalo.
1. Izinja zezimpumputhe
Izinja zingaqeqeshwa ukuqondisa abantu abangaboni ukuze bakwazi ukuxoxisana nomhlaba ngaphandle kokulekelelwa. Zisebenza njengamagama omnikazi wazo. Akukho emthethweni noma kuphi e-U.S., Noma eCanada, noma eBrithani, nakwamanye amazwe amaningi, ukwala umuntu ongaboni oqondiswa yinja ukufinyelela kunoma iyiphi indawo yomphakathi. Lokhu kufaka phakathi izitolo, izindawo zokudla, amabhange, nanoma ikuphi lapho izinja zingavunyelwa ngenye indlela.
Umthetho waseMelika okhubazekile eMelika ucacile kuleli phuzu. Ukuqeqeshelwa izinja ezinjalo kudinga kakhulu, ngoba inja kumele ikwazi ukuzulazula ezindleleni, emigwaqweni, ezitebhisini - igweme zonke izithiyo, kufaka phakathi lezo ezingaphezulu ezingalimaza umnikazi wazo (kodwa hhayi yena uqobo). Kumele bakwazi ukungazinaki zonke iziphazamiso ngenkathi benza umsebenzi wabo.
Ngokuvamile okubizwa ngokuthi “Izinja Zokubona-Zamehlo” noma “Izinja Eziqondisayo,” empeleni kunezinhlangano eziningi e-U.S. Ezinikeza izinja eziqondisayo kubantu abayizimpumputhe. Kodwa-ke, ngenkathi i-Guide Dogs for the Blind isogwini olusentshonalanga (kanye ne-Guide Dogs of the Desert ne-Guide Dogs of America, zombili eningizimu yeCalifornia, ne-Eye Dog Foundation e-Arizona) ne-The Seeing Eye (phakathi kwabanye abaningi) ivuliwe empumalanga, cishe zonke izikole eziyi-15 e-United States zikhonza abantu ezweni lonke.
Eqinisweni, abantu bangathola inja kunoma yisiphi isikole, ngaphandle kwezinhlanu (ezisebenza kuphela ezifundeni zabo), nezinja eziningi ezivela eThe Seeing Eye, Leader Dogs, Guiding Eyes nezinye izikole zisebenza ogwini olusentshonalanga, ngenkathi izinja eziningi ezivela ku-Guide Dogs for the Blind zisebenza ezweni lonke. Indawo okuyo ngokuma kwezwe into eyodwa kuphela ekukhetheni isikole esiqeqesha inja esizofunda kuso, futhi kuyaqabukela kubaluleke kakhulu.
Lokhu akunjalo kuwo wonke amazwe anezindawo eziningi zokuqeqesha izinja eziyisiqondisi. E-UK, ngokwesibonelo, i-Guide Dogs for the Blind Association (GDBA) isebenza izikhungo eziningana zezifunda, futhi ithumela abafakizicelo bayo esikhungweni esiseduze nekhaya labo ukuqeqeshwa. Zonke lezi zikhungo zesifunda 'zingamagatsha' noma 'amakhampasi' e-GDBA, ngokungafani nezikole ezihlukahlukene zokuqondisa izinja zaseMelika, ezimele ngokuphelele komunye nomunye. Ngokungafani nezikole zaseMelika, izikhungo zokuqeqesha zesifunda ze-GDBA zilawulwa maphakathi, zisebenza ngaphansi kwesethi efanayo yezinqubomgomo, zisuselwa kusabelomali esifanayo futhi zisebenzisa izindlela ezifanayo zokuqeqesha.
E-United States naseCanada, izinja eziholayo zezimpumputhe kuphela ezinawo 'amagatsha' noma ubukhona ngaphandle kwendawo yabo emaphakathi. Izinja eziqondisayo zezimpumputhe uhlelo lokuqala lokuqeqesha izinja e-US ukusebenzisa izikhungo ezimbili ngaphansi kokuphathwa okufanayo, nekhampasi yalo entsha eBoring, e-Oregon (ikilasi lokuqala lathweswa iziqu ngoSepthemba 1995).
Izinhlobo ezisetshenziswayo ukubuyisa okuphuzi nokumnyama kweLabrador nezinja ezingabelusi baseJalimane, imvamisa. Ezinye zingasetshenziswa, njengokubuyisa igolide, kepha imvamisa izikhungo zikhetha ukusebenzisa izinja ezinekhono eliphakeme lokuqashelwa kanti ezinye izinhlobo zimane zibonakala zingcono ekuqeqesheleni umsebenzi wokuhola.
Izinhlobo ezijwayele ukusetshenziswa njengeziqondisi zezinja zingama-Labrador retrievers, ama-retrievers egolide nezinja zomalusi zaseJalimane.
Cishe amaphesenti angama-60-70 ayo yonke imihlahlandlela yokusebenza e-United States yiLabradors. (Amalebhu aphuzi, amnyama noshokoledi wonke asetshenzisiwe, noma ngabe amaLabradors amaningi asetshenziswa njengezinja eziqondisayo anamalebhu aphuzi noma amnyama kanti ezinye izikole azisebenzisi ushokoledi ngqo.)
Ezinye izinhlobo, ezinjengabashayi besibhakela, ukubuyisa okuyisicaba nokugoqene, amakoloni emingcele, amakhoba, izisebenzi zokuphrinta zase-doberman, ama-ridgebacks aseRhodesia, abelusi base-Australia, izikhombisi-ndlela zaseJalimane ezinwele ezimfushane, ama-dalmatians, kanye nama-poodles ajwayelekile, kwesinye isikhathi asetshenziswa ezinye izinhlelo.
Ukubuyiswa okugcwele flat, ikakhulukazi, kubonakala kuthola ukuthandwa yizikhungo zokuqeqesha izinja eziqondisayo.
Iziphambano zeziningi zalezi zinhlobo ziyasetshenziswa, ngezinye izikole, ngeziphambano zeLab-golden, Lab-GSD ne-GSD-huskie ezivame kakhulu. Kwesinye isikhathi, Ukubuyiswa Kwegolide Okuncane zisetshenziselwa nomsebenzi wenkonzo. (EBrithani nase E-Australia , Iziphambano zeLabrador / zegolide nezaseLabrador-poodle ( Umabhebhana ) zivame ukusetshenziswa njengemihlahlandlela, futhi kusetshenziswa kakhulu iziphambano eziningi, kunezikole zase-U.S.
Ezinye izikhungo zinezinhlelo zazo zokuzalela, njenge-Dog Dogs. Abanye basebenzisa abalimi bendawo. Umkhuba ubonakala ubheke ezinhlelweni zokuphathelene nokuzala, yize iningi lesitoko, uma lingasetshenziswa njengezinja eziqondisayo nalo lizoncintisana emicimbini ejwayelekile yekennel club. Isibonelo, i-CH Lobuff's Bare Nentialities (i-black Lab) yaklanywa yi-Guide Dog Foundation yezimpumputhe futhi ikhiqiza imidlwane yomibili indandatho kanye nesisekelo.
Amalebhu, ama-goldens kanye nabelusi baziwa kakhulu njengezinkombandlela ngenxa yesimo sabo, ubuhlakani, ukwenza izinto ezihlukahlukene, usayizi nokutholakala. Izinja eziqeqeshwe njengezinja eziqondisayo kumele zibe yizisebenzi ezihlakaniphile, ezizimisele, ezinkulu ngokwanele ukuba ziqondise kahle ekuboshweni futhi zincane ngokwanele ukuthi zilawulwe futhi zilingane kahle ngaphansi kwamatafula okudlela nasemabhasini nakwezinye izindlela zokuhamba zomphakathi.
Izinhlobo ezintathu ezijwayelekile ezisetshenziselwe lo msebenzi zikhethwe ngoba inani elikhulu labantu lalezi zinhlobo lihlangabezane nezidingo ezidingekayo zenja eqondisayo futhi lezi zinhlobo zingafaniswa kalula nohlu olubanzi kakhulu lwabantu abayizimpumputhe nezidingo zabo kumhlahlandlela. Ukwengeza, lezi zinhlobo ezintathu zithandwa e-United States futhi ukuzitholela ukuqeqeshwa noma ukugcwalisa isitoko sokuzalanisa kubonakale kulula kunokuthola okungajwayelekile, kepha mhlawumbe izinhlobo ezifanele ngokulinganayo.
Imindeni ekhulisa imidlwane imane nje iyiqeqeshele ukuthobela izinja okuyisisekelo, futhi icindezele ukuzijabulisa okuningi nemikhuba emihle. Isibonelo, uma uya embukisweni wezinja, kungenzeka ubone imidlwane enjalo lapho, ifunda ukuyithatha kancane. Izinja zibuyela emuva koqeqesho lwazo oluhlelekile lapho sezineminyaka cishe eyi-1.5 ubudala, yize zingabuyela emuva zisencane ezinonyaka owodwa.
Izingane zivame ukukhethwa njengabafuyi bemidlwane, yingakho eziningi zixhumanisa nezinhlelo ze-4-H. Ngokuthokozisayo, imidlwane ekhuliswa yizingane kungenzeka ukuthi ikwenze ngokuqeqeshwa kwenja okusemthethweni. Umehluko awukho mkhulu, kepha 'ubalulekile.'
Abavolontiya bezimbuzi bayakhuthazwa ukuthi bakhokhele izindleko zabo kokuhlangenwe nakho okusha ngangokunokwenzeka, bebuka ukusabela kwemidlwane futhi banikeze isiqiniseko nokuvikeleka kwemidlwane njengoba behlangabezana nezixuku, izimoto, izakhiwo ezingajwayelekile, ezinye izilwane nokunye okuningi. Baphinde bafundise izinja eminye imiyalo eyisisekelo yokulalela efana nokuthi 'hlala phansi' nokuthi 'phansi,' kepha abafundisi bezinja bazoqinisekisa ukuthi izinja ziyayazi le neminye imiyalo yokulalela ngaphezu kokuzifundisa ngomsebenzi wokuqondisa, uqobo lwawo.
Lapho izinja zibuyela emuva ukuqeqeshwa kwazo zihlolwa ngokucophelela nganoma yikuphi ukungahleleki kwe-hip nezinye izinkinga zempilo. Uma izinkalo zingezinhle kakhulu ngokushesha 'zithatha umhlalaphansi.' Ukuqeqeshwa okusemthethweni kuthatha cishe izinyanga eziyi-6.
Izinja zingahluleka ngezizathu ezahlukahlukene. Njengoba ungaqagela, ezinye izinja azishintshi kahle zisuka ekuhlaleni komdlwane zize zihlale ezindlini zezindlwana kanti abanye bavele bacindezeleke bese behluleka. Umkhulisi wembuzi uthola ithuba lokugcina inja ehlulekile. Uma umfuyi we-puppy engakwazi ukugcina inja angayibeka ekhaya. Izinhlu zokulinda izinja ezinjalo zivame ukuba yiminyaka eminingana ubude!
Ngaphambi kokuba inja eqondisayo inikezwe umuntu ongaboni, umuntu ongaboni kufanele ajoyine ukuqeqeshwa esikhungweni. Lokhu kuqeqeshwa kuthatha amasonto ambalwa kanti ngalesi sikhathi umuntu ongaboni uzohlala esizeni. Abantu ababuya ukuthola inja ezongena esikhundleni bavame ukuthatha isigaba 'sokuvuselela'.
Izinhlelo ezimbalwa ezincane ziqhuba ukuqeqeshwa 'ekhaya', lapho umfundisi aletha inja eqeqeshiwe kumfundi futhi aqeqeshe iqembu endaweni yabo yasekhaya. Le yindawo ekhula ngokushesha kakhulu yokuqeqeshwa kwezinja, nezinhlelo ezintathu ezintsha zokuqeqesha amakhaya ezaqala ukusukela ngonyaka we-1990. Iningi lalezi zinhlelo zincane zokusebenza kwe-1-2 zabaqeqeshi futhi azikaze zihlele ukusebenzela abantu abaningi ngezinhlelo zokuhlala. Zonke izinhlelo zokuqeqesha emakhaya njengamanje zikhawulela insizakalo yabo esifundeni sabo sezwe, sisebenzela kuphela labo abafake izicelo ezifundazweni zabo kanye nezakhelene nabo.
Kunobuhle nobubi kuzo zombili izinhlobo zokuqeqeshwa, futhi basebenzela abantu abanezidingo ezahlukene nokulindelwe. Iningi labaphathi bezinja eziqondisayo lisakhetha ukuya emakilasini esikhungweni sokuqeqeshelwa ukuhlala ukuze bathole futhi baqeqeshe nezinja zabo.
Kukhona, ngaphezu kwezikole zokuqeqesha zokuhlala kanye nezinhlelo zokuqeqesha emakhaya, abaqeqeshi abambalwa abazimele bezinkombandlela zezinja nabantu abambalwa abayizimpumputhe abaziqeqesha ngokwabo.
Kunezinhlelo eziyi-15 ezisungulwe e-United States eziqeqesha imikhombandlela yezinja yezimpumputhe (kanye neziningana eCanada nakwamanye amazwe emhlabeni jikelele, kunjalo.) Kulezi, iFidelco, iSoutheastern, izikole ezimbili ezintsha esifundazweni saseNew York, ( I-Upstate Guide Dog Association ne-Freedom Guide Dogs), kanye nohlelo olusanda kusungulwa e-Oregon (Northwest Guiding Eyes) lusiza kuphela abantu abavela 'esifundeni' sabo. Bonke abanye basebenzela noma ngubani ovela e-United States noma phesheya.
2. Izinja Zokuzwa Nezimpawu
Ezinye izinja ziqeqeshelwe ukusiza abantu abayizithulu, ngamazinga ahlukene okukhubazeka. Baxwayisa abantu babo ngemisindo ehlukahlukene, imvamisa ngokuza kumuntu bese bebuyela emthonjeni womsindo. Bazokhombisa insimbi yomnyango nokungqongqoza, izingcingo, ama-alamu entuthu, izingane ezikhalayo nokunye okuningi.
E-United States, bajabulela amalungelo afanayo okufinyelela njengezinja eziqondisayo futhi bavunyelwe noma kuphi, yize njengoba zingaziwa kabanzi, abantu babo ngokuvamile kufanele babonise ikhadi lokuzazisa yize lokhu kungadingeki ngokomthetho.
3. Izinja Zokusiza
Nasi isigaba sezinja ezinkulu nezinhlobonhlobo ezisiza abaninizo bazo ngezinye izindlela ngaphandle kwezinja eziqondisayo zendabuko noma izinja ezizwayo. Lezi zinja zingasiza ukuqoqa izinto, ukuvula nokuvala iminyango, ukudonsa izihlalo zabakhubazekile, kanye neminye imisebenzi eminingi yokusiza ngokomzimba.
Inja Yosizo (ADI)
I-ADI yinhlangano engenzi nzuzo okuyinhlangano yezinye izinhlangano ezingenzi nzuzo eziqeqeshela izinja ukuzwa nokuhamba. Basebenza ukuvivinya isitifiketi somgwaqo sezinja zokuzwa nokuhamba. Umqondo ngukuza novivinyo olungaba yindinganiso ye-United States kunokuba izwe ngalinye / isifunda ngasinye sibe namazinga ahlukile.
Banolwazi ezinhlanganweni eziningi zokuqeqesha e-United States. Bahlola imibiko yezinkinga ngokusiza abaqeqeshi bezinja (funda abaculi abacijile).
Abangane beCanine Yokuzimela
I-CCI yasungulwa ngo-1975. Balinganisela ukuthi inja ngayinye ithatha cishe ama- $ 20 000 ukuyiqeqesha, izindleko ezikhokhelwa iminikelo nomsebenzi wokuzithandela. Kuyinhlangano yezwe lonke enezahluko eziningi zesifunda.
Le nhlangano ibambe iqhaza ekuqeqesheni izinja ukusiza abantu abakhubazekile. Baqeqesha izinja ezinesiginali yezithulu, nezinja zabantu abakhubazekile ngokomzimba noma abakhubazekile.
AbakwaCanine Companions for Independence bahlinzekele izinja ezinamakhono aphezulu kubantu abakhubazekile kusukela ngo-1975. I-CCI iqale njengenhlangano encane, esekhaya futhi isikhule yaba yinhlangano engenzi nzuzo enamandla enezikhungo ezinhlanu zesifunda ezweni lonke.
Ukuqeqeshwa okukhethekile kweCanine Companion kuqala ekhaya lomvuni womdlwane wokuzithandela ophakathi kwamasonto ayisikhombisa kuya kwayisishiyagalombili ubudala. Umfuyi wembuzi ubhekele ukunakekelwa kwenja encane, ukuzihlanganisa nabantu nokufundisa ngemiyalo eyisisekelo. Cishe unyaka owodwa ubudala, inja ibuyiselwa esikhungweni sokuqeqesha esifundeni seCCI izinyanga eziyisithupha zokuqeqeshwa okuthuthukile ngumqeqeshi weCCI ochwepheshe. Inja bese isilungele inkambo yokuqeqeshwa yamasonto amabili kuya kwamathathu lapho umnikazi wayo omusha efunda ukusebenza nenja eqeqeshwe ngokuphelele.
Kubiza izinkulungwane zamaRandi ukuzala, ukukhulisa, nokuqeqesha iCanine Companion ngayinye, kepha abamukeli bakhokha imali encane yokufaka isicelo nokuqeqeshwa. Inja inikezwa mahhala. I-CCI incike ngokuphelele eminikelweni; ayitholi izimali zikahulumeni. I-CCI futhi ithembele kakhulu ekuzinikeleni kwamavolontiya ayo amaningi, adlala indima ebalulekile emsebenzini weCCI wokuhlinzeka izinja ezehlukile kubantu abahlukile.
Izinhlobo zeCCI ezisetshenziselwa insizakalo nezinja zenhlalo zingamaLabhu amnyama naphuzi, ukubuyisa kwegolide, abelusi baseJalimane, kanye nomxube weLab / golden retriever. I-CCI isuka ekusebenziseni abelusi baseJalimane ngezizathu ezimbili: okokuqala, ukubuka umphakathi (nokwesaba) abelusi baseJalimane njengezinja 'zamaphoyisa' noma 'ukugada', okwesibili, abelusi baseJalimane babophezela kakhulu kubantu futhi uhlelo Kunzima kubo ngoba kuqala bakha isibopho esiqinile kumfuyi wabo wezinyane, bese kubaqeqeshi babo lapho bebuyela kuCCI, bese kuba ngumnikazi wabo okhubazekile ekugcineni. Izinja zesiginali zisebenzisa ama-corgis nama-collies emingcele.
I-CCI izosebenza nabantu abadinga usizo ukuthola ukuthi inja eqeqeshwe kahle ingalunikeza yini lolu sizo. Izinja zingafundiswa ukubuyisa izinto ezahlukahlukene - ngisho nokuhlukanisa phakathi kwezinto ezithile - nokusebenzisa izinto ezahlukahlukene. Izinkawu sezizanyelwe le njongo, njengoba zinobungcweti obukhulu. Kodwa-ke, azifundiseki ngokuthembekile futhi ziyabiza kakhulu, ngakho-ke izinja ziveza enye indlela esebenzayo. Njengoba kunikezwe ezinye izandiso, njengezibambo zezintambo eminyango nokushintshwa kokukhanya, izinja zinganikeza umuntu okhubazekile ukuhamba okuphelele ngaphakathi kwakhe noma ekhaya lakhe.
I-CCI ithola futhi iqeqeshe izinja ezahlukahlukene ngezindlela ezahlukahlukene zosizo: izinja ezizwayo, izinja ezisizayo ezikhubazekile ngokomzimba, njengezinja zokwelapha. Onke a-neutered, njengezinja eziqondisayo. Abantu abazothola enye yalezi zinja kudingeka ukuthi bahambele umhlangano wamasonto amabili wokufunda ukuxhumana nokunakekela usizo lwabo. Njengoba kudingeka, abantu nezinja zabo banikezwa izimvume ezikhomba izinja njengabalingani abanamalayisense e-canine - lokhu kwanele ukuthola ukungena okungenakuphikiswa ezindaweni eziningi, njengezinja ezaziwa kakhulu ze-Seeing Eye.
I-National Education for Assistance Dog Services, Inc. (NEADS)
INEADS yinhlangano engenzi nzuzo eqeqesha ukuzwa, insizakalo, okukhethekile, izinja zenhlalo nezinsizakalo zasekilasini.
Inja ezwayo iphendula imisindo ebalulekile njenge-alamu yomlilo noma i-alamu yentuthu, ukukhala kocingo, ukungqongqoza emnyango noma insimbi, ingane ekhala igama lomuntu elibizwa noma izinto zasendlini. Inja iya emuva naphambili emsindweni kuze kube umlingani wayo oyisithulu noma ongezwa kahle uyamlandela aye emthonjeni womsindo.
Inja yokusebenza ithola futhi ihambise umuntu okhubazekile ngokomzimba noma osebenzisa isihlalo sabakhubazekile. Inja ifuna usizo, icosha izinto eziwisayo, ilande phezulu, ivule amaswishi okukhanya, idonse isihlalo sabakhubazekile kanye nezidingo zabathwali.
Inja ekhethekile yenza imisebenzi eminingi efanayo kumuntu onokukhubazeka okuningi, njengokungezwa nokukhubazeka ngokomzimba, futhi udinga usizo olukhethekile. Izinsizakalo zingaqeqeshwa lapho kudingeka.
Inja yezenhlalo isebenza ezinganeni nakubantu abadala abangakwazi ukuthatha umthwalo ophelele wenja esebenzayo kepha bangazuza kunani lokwelashwa kwenja. Zenzelwe izindawo zokuhlala ezifana namakhaya asebekhulile, izindlu eziphakathi nendawo nezikhungo zokwelashwa kwengqondo. Banamakhono athuthukile enja yesevisi kepha kwesinye isikhathi ingaphathwa umuntu wesithathu. Ziqinisekisiwe ukufinyelela komphakathi.
Inja yokusiza ekilasini iyithuluzi lokufundisa elisha elisetshenziswa ngabasebenzi bezenhlalakahle, abelaphi, imfundo yasekuqaleni kanye nezidingo ezikhethekile zothisha abasebenza nezingane ezikhubazekile ngokomzimba, ngokomzwelo nangentuthuko. Izinja zibasiza ukuba bafundise imiqondo eyisisekelo efana nokuthi 'phezulu,' 'ngaphansi,' 'phansi.' Izingane ezinemilando yokuhlukunyezwa ngokocansi noma ngokomzimba zihlala zidinga isisusa sokudalula ngokushesha. Inja yosizo, engahluleli futhi enothando olungenamibandela, inikeza usizo oludingekayo ukukhomba izingane ezisenkingeni.
I-NEADS isebenzisa imfundo esekwe esikhungweni, umqondo wempumelelo emangalisayo. Lokhu kuthuthukisa ubudlelwano obuqinile bokusebenza phakathi kwenja yesikhangiso samakhasimende ngenkathi beziqeqesha ndawonye amasonto amabili, befunda ukusebenza njengeqembu ngaphansi kokuqondiswa kochwepheshe kwabasebenzi. Lapho beshiya amaklayenti bese benesibopho esiphelele sokuphathwa, ukunakekelwa kanye nempilo yabo ngokuqhubeka nokuxhaswa kokufinyelela kwe-NEADS.
INEADS iqeqeshe izinja ezingaba ngu-600 ukwenza lo msebenzi oshiwo ngenhla. Lo nyaka UNGADINGA unyaka wama-20 wokuhlinzeka ngosizo lwezinja. QAPHELA: ukuthi amaphesenti angama-75 ezinja eziqeqeshwe yi-NEADS asindiswa ngephawundi / yokukhosela.
E-United States, izinja zokwelapha azinalungelo lokuthola izinzuzo ezifanayo nezinja ezisebenzayo.
Inothi Mayelana Nezinja Zokwelapha
Izinja zivame ukusetshenziswa ekwelashweni. Ngokuvamile lokhu kuhilela ukuvakashela izibhedlela, izindawo zokunakekela, amakhaya asebekhulile, njll. Ukujabulisa iziguli. Kunamaqembu ahlukahlukene aqeqesha izinja zokwelapha, ezinye zasendaweni kanti ezinye zikazwelonke. Abanye basebenzisa isivivinyo se-AKC Canine Good Citizen ukukhetha izinja ezifanele, abanye bazihlelele izivivinyo zabo zesimo.
Qaphela ukuthi izinja zokwelapha zikhona hhayi kubhekwe ngumthetho e-United States ukuba nezinga elifanayo nezinja zensizakalo. Izinja zensiza zisiza ngqo abantu bazo abakhubazekile ngemisebenzi yansuku zonke ngandlela thile; izinja zokwelapha ziphathwa ukusiza abanye ngezikhathi ezithile, njengokuvakashela isikhungo.
Ngakho-ke imithetho egunyaza ukutholakala kwezinja zensizakalo, okumele zihambisane nabantu bazo, ayisebenzi ezinjeni ezingadingi ukuhlala nabantu bazo ngaso sonke isikhathi kepha kunalokho zisebenza ezindaweni ezithile.
Amagama E-Poodle: Ama-450 + Amagama Aphelele, Adumile NamaPoodle
I-Curly Coated Retriever: Konke Odinga Ukukwazi
izinja zingadla yini izigaxa zikaphayinaphu
ibukeka kanjani iqhude
izingxenye zomlenze wenja
ilebhu ephuzi nokubuyisa okusagolide
imidlwane ye-pitbull ne-german